I-PUBG UC yamahhala (Izindlela ze-2020) - I-Generator Eveziwe - Ukudlala
Ungayithola Kanjani i-PUBG UC yamahhala?
Kulokhu okuthunyelwe, sizokusiza ngezindlela ezahlukahlukene zokuthola i-UC yamahhala ku-PUBG. Lezi zindlela azibandakanyi ucwaningo futhi azichofozi ngamayunithi okuloba. Ungazama lezi zindlela ukuthola i-UC yamahhala ku-akhawunti yakho ye-PUBG. Futhi sizophendula umbuzo omkhulu kakhulu maqondana ne-UC Generator yamahhala - uyasebenza noma cha.Ngakho-ke nika lokhu okuthunyelwe ukufundwa ngokugcwele ukuze wazi ukuthi ungayithola kanjani i-UC yamahhala.
Ngabe i-Free UC Generator iyasebenza?
Abadlali abaningi bayasola ngokusebenzisa i-generator ye-UC kepha ungakhathazeki. Kulesi sigaba, sizobe sibuyekeza yonke imibono kanye nokuphikisana nama-generator e-PUBG UC.Ama-PUBG UC's anikezwa ngabantu abazimisele ukukunika noma bakhiqize besebenzisa i-code code.
I-generator izosebenzisa izinguquko nezinyunyana ukufaka i-UC ku-akhawunti yakho ye-PUBG, ezobukeka ingeyangempela, kepha ingahle isebenze noma ingasebenzi. Ngokusebenzisa i-UC generator, kunamathuba aphansi kakhulu okukufaka ku-akhawunti yakho. Esikhundleni salokho, ungabeka engcupheni izinto eziningi ngokusebenzisa lokhu. Kunokwehla okuningi ongafuna ukukucabangela ngaphambi kokusebenzisa i-generator code.
Inkinga yobumfihlo:Ngenkathi usebenzisa i-generator yamahhala ye-UC ekugcineni, uzohlala ucelwa ukuthi ugcwalise ucwaningo oluzolindela ukuthi ugcwalise imibuzo eminingi yomuntu siqu, noma luzokucela ukuthi ulande izinhlelo zokusebenza ezimbalwa kumasayithi ongaziwa. Lokhu akuyona into ngaphandle kwesithiyo kubadlali bamageyimu ukuthola imininingwane yabo eyimfihlo noma ukuwayisa kusayithi elibi.
Kumakiwe:I-PUBG inenqubomgomo eqinile yabaduni nabadlali abasebenzisa le mikhuba engekho emthethweni ukuthola i-UC yamahhala. Okubi ukuthi i-PUBG ingaqeda i-akhawunti yakho unomphela, futhi ngeke udlale i-PUBG kusuka ku-akhawunti efanayo.
Izindlela ezi-6 eziphezulu zokuthola i-PUBG UC yamahhala:
Njengoba sonke sazi, i-Player Unknown BattleGround, eyaziwa nge-PUBG, isibe ngomunye wemidlalo edume kakhulu nefunayo ye-Battle Royal kule minyaka embalwa edlule. Ku-PUBG, imali isetshenziselwa ukuthenga izikhumba ezingavamile, ama-emotes, nezinhlamvu. Ngakho-ke ukuthenga i-UC kubiza kakhulu, ngakho-ke ukuxazulula le nkinga, size nama-hacks ambalwa alula ukuthola i-UC yamahhala ngaphandle kokuchitha imali. Nazi ezinye izindlela ongazisebenzisa:
Izindlela Zokuthola I-Robux yamahhala
Amakhodi wamahhala we-PSN - I-Generator Works?
Umphakathi we-PUBG mkhulu futhi usabalale ngaphezu kwabasebenzisi abayizigidi eziyi-13, kanti abanye babadlali abahle futhi bangama-YouTubers, i-Game Streamer, abadali be-PUBG, nabadlali abangochwepheshe. Ungabalandela laba badali nabadlali futhi ubambe iqhaza kuma-giveaway abo ukuze uhlele njalo futhi ube sethubeni lokuwina i-UC ne-BP yamahhala.
Kodwa-ke, izibalo zakho zokukhethelwa ukunikezwa ziphansi, kepha intengo ibizoba ngaphansi kwe-lottery uma ukhetha. Ungahlala uzama ukubamba iqhaza nokulandela abadali abaningi ngangokunokwenzeka ukuze ukhulise ukufinyelela kwakho futhi wandise amathuba wokuwina i-UC yamahhala.
2. Ukudlala Emincintiswaneni
Ezinye izindlela zokuthola i-UC yamahhala ukubamba iqhaza nokudlala emincintiswaneni. Imincintiswano eminingi ye-PUBG yenzeka emhlabeni wonke, lapho abadlali abaningi bezibandakanya khona.
Le mincintiswano inezintengo eziphakeme kakhulu ongayinqoba futhi uzizuzele ukuthenga i-UC ku-PUBG. Eminye imincintiswano ibuye ibe nama-UC’sUC njengenani labo lokuwina. Ungahlala ubambe iqhaza kule mincintiswano futhi ubonise futhi usebenzise amakhono akho wokudlala ukuze uthole i-UC yamahhala.
3. Bheka futhi uthole Izinhlelo Zokusebenza
Ezinye izinhlelo zokusebenza ziyatholakala lapho ungathola khona imali ngokwabelana futhi ubhekise kuzinhlelo zokusebenza ezimbalwa ezishiwo. Isibonelo, uma wethula umuntu kuhlelo lokusebenza bese ululanda kudivayisi yabo, uthola umvuzo ngamanye amaphuzu. Lawa maphuzu angasetshenziselwa ukubuyisela i-UC yamahhala ku-PUBG.
4. I-Idle Empire
Kusekhona indlela esemthethweni yokuthola i-PUBG UC yamahhala ngaphandle kokumakwa noma ukuchitha isikhathi sakho kunoma iyiphi enye iwebhusayithi ye-UC generator. Uhlelo lokusebenza lwewebhu lubizwa nge-Idle Empire. Idle Empire yipulatifomu ezokuvuza ngokuhlanganyela imibono yakho ngemidlalo, isoftware, nemikhiqizo.
Inqubo iqondile; kufanele nje uqedele ukubhalisa bese uqedela izinhlolovo ezinikeziwe, futhi i-Idle Empire izokuvuza ngeBitCoins, ikhadi le-Amazon Gift, nebhalansi ye-PayPal.
Izinyathelo zokuthola i-PUBG US yamahhala kusuka ku-Idle Empire:
Vakashela iwebhusayithi esemthethweni ye-Idle Empire noma chofoza lapha ukuya eMbusweni we-Idle.
Uma usukhasi lewebhu le-Idle Empire, chofoza ukubhalisela ukudala i-akhawunti entsha. Idle Empire iphinde yagcwalisa ubuqiniso bakho nge-akhawunti yakho yakwa-Google.
Ngemuva kokuphothula inqubo yokubhalisa, uzoqondisa ideshibhodi ye-Idle Empire. Ungaqala ukunikeza izinhlolovo zezinkampani, ukubukela amavidiyo, ukuhlola imidlalo, nezinhlelo zokusebenza, nokuphendula imibuzo elula. Ngokwenza lokhu, uzonikezwa amaphuzu ongawasebenzisa.
Ukuze usebenzise iphuzu lakho olitholile, uzodinga ukuya esigabeni seWidhtral bese uthola 'Amakhadi Esipho' wedivayisi yakho. I-Idle Empire inamakhadi wesipho kuwo womabili ama-Google Play Isitolo ne-Apple App Store. Ungazihlenga ezakho lapho.
Ungawasebenzisa la makhadi ezipho ukuthola i-PUBG UC yamahhala ngaphandle kokuvinjelwa noma ukumakwa.
5. I-Elite Royal Pass
I-Elite Royal Pass ingenye inketho yokuthola ama-PUBG UC wamahhala. Ukuthola i-UC yamahhala ku-Elite Royal Pass, uzodinga kuphela ukuthenga i-Elite Royal Pass ezokubiza nge-600UC ku-PUBG, futhi njengoba udlala futhi uthuthuka kulo mdlalo, izinga lakho le-RP lizokwenyuka, bese kuthi ngokufanele, uklonyeliswe ngezikhumba, ama-emotes nama-UC wamahhala.
Ku-RP 3, 7, 13, 17, 23, 27, 33, 37, 43, 47, 53, 57, 63, 67, 73, 77, 83, 87, 93, no-97 uvuzwa ngo-30 UC ngamunye. Ngakho-ke uma uthenga i-Elite Royal Pass, uzothola ama-UC amahhala angama-600 kanye nezikhumba ezithile ezinhle.
6.Ikhadi Lesipho le-Google Play
Uma uneKhadi Lesipho leGooglePlay, ungathola ngisho ne-PUBG UC's kulo. Ungalandela lezi zinyathelo ezilula zokuthola i-UC kusuka ku-Google Play Card Card yakho.
Qalisa uhlelo lwakho lokusebenza lwe-PUBG bese uya esigabeni se-UC, lapho ungathenga khona ama-UC.
Chofoza kunqwaba ye-UC ofisa ukuyithenga noma ube neKhadi Lesipho le-Google Play laleyo mali.
Ithebhu yokukhokha izovela esikrinini lapho kuzodingeka ukhethe imodi yokukhokha. Ungakhetha ‘Sebenzisa ikhodi’ bese ufaka ikhodi yakho yekhadi lesipho le-Google Play kusuka kuthebhu yokukhokha.
Ngemuva kokukhokha, i-PUBG izofaka i-UC ku-akhawunti yakho.
Yini engingayenza ngePUBG UC?
I-PUBG ngumdlalo ophumelelayo onemali yawo ebizwa nge-UC. Nge-PUBG UC, ungagcwaliswa ngokuphelele ngezikhumba ezintsha, ama-emotes, nokusonga. Nge-PUBG UC, ungathenga i-Battle Pass, izinhlamvu ezahlukahlukene, Izikhumba, ama-emotes, ukugoqwa kwezikhali nemoto, nokunye okuningi. Uzobe uthola izinto ezigcwele kahle ezihlelwe kahle zabadlali abahlukile kuphela.
Sifisa ukuthi lokhu okuthunyelwe kukusizile uthole izindlela zangempela zokuthola i-UC yamahhala ku-PUBG. Uma ngabe ukuthandile lokhu okuthunyelwe, shiya imibono yakho nokubukwa kwakho ebhokisini lokuphawula elingezansi, Noma uma uneminye imibono emihle yokuthi ungayithola kanjani i-UC yamahhala, bese wabelana ngayo nathi.
Amakhodi Wokwazisa weRoblox - Ukusebenza (Kuvuselelwe)
Ukulungisa i-PUBG Yehlulekile Ukuqalisa I-Steam
Ungaluthola Kanjani Usizo ku Windows 10?
bukela imibukiso yakudala ye-tv online iziqephu ezigcwele zamahhala
amawebhusayithi ukubuka ama-movie amasha online mahhala
bukela ama-movie phezulu ku-10 ku-inthanethi
I-emulator engu-ios 8 ye-pc
ukusakazwa kwe-tv online mahhala